Caalamka, 01 July 2016
Wareysi: Gabar ka Bad-baaday Weerarkii Istanbul
Dadkii ku dhaawacmay qaraxyadan waxaa ka mid aheyd Shamso maxamed Cabdulle oo Transit ku aheyd garoonka marka uu weerarku dhacayay kuna dhaawacantay.
Garoonka Diyaaradaha Ataturk oo Dib Loo Furay
Garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul ayaa si buuxda dib loogu furay arbacada maanta ah, kadib weeraro ismiidaamin ah oo fiidnimadii talaadada lagu dilay 41 qof islamarkaana lagu dhaawacay in ka badan 200.
Qaraxyo Gilgilay Garoonka Diyaarahada Istanbul
Dalka Turkiga, Ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay, in kabadan 20 kalena way dhaawacmeen kadib markii qaraxyo ismiidaamin ah ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul.
Israel iyo Turkey oo Dib Usoo Celiyey Xiriirkooda
Israel iyo Turkey ayaa gaaray heshiis dib loogu soo celinayo xiriirka labada dal oo bur-buray sanaddii 2010.
Yurub oo Britain ugu Baaqday in la Dedejiyo Kala Gurashada
Wasiirada Arrimaha Debedda ee lixda dal ee aasaasay Midawga Yurub ayaa kulan ku yeeshay dalka Jarmalka iyaga oo ka wada hadlay go'aanka ay qaateen shacabka reer Britian, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo bilaabo kala gurashada Britian iyo Midawga Yurub.
Ra'iisul Wasaare David Cameron oo Is-casilaya
Ra’iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa ku dhowaaqay inuu is-casilayo kadib markii Britain ay u codeysay inay ka baxdo Midowga Yurub.
Soomaalida Britain oo ka Hadlay Ka Bixitaanka EU
Saameynta Ka Bixitaanka Britain ee Midowga Yurub
Ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub ayaa dhul gariir siyaasadeed ka abuuray Biritan gudaheeda iyo welba qaaradda Yurub.
Warbaahinta UK ayaa sheegtay in aftidii la qaaday shalay ay dadku ku codeeyeen in UK ay ka baxdo Midowga Yurub.
Britain: Tirinta Codeynta oo Socota
Codeyntii taariikhiga aheyd ee ku aaddaneyd haddii Britain ay ka baxeyso Midowga Yurub iyo in kale, ayaa soo dhammaatay, iyadoo tirinta codadkuna ay socoto.
Dalka Britain ayaa waxaa maanta ka billowday codbixin taariikhi ah, taasi oo dhammaadka maanta go’aan ka gaari doonta in Britain ay kasii mid ahaato Midowga Yurub iyo in kale.